क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य,नियुक्तिकै दिनबाट निजिमा काम गर्न छोडे - Chitwan Online Khabar
क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य,नियुक्तिकै दिनबाट निजिमा काम गर्न छोडे
२५ बैशाख २०७४, सोमबार ११:३७
विपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. विजयचन्द्र आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ । अस्पतालको संचालक समितिको आईतवार बसेको बैठकले डा. आचार्यलाई कार्यकारी निर्देकमा नियुक्ति गरेको हो ।
अस्पतालको नियमावली अनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट ढा. आचार्य नियुक्त भएका हुन । १३ जना चिकित्सकले कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि आवेदन दिएका थिए । अन्र्तवार्ता र कार्ययोजनाको आधारमा उहाँलाई नियुक्ति गरेको अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेले बताउनुभयो ।
यसअघि एकेडेमिक कोर्डिनेटर हुनुभएका आचार्य स्त्री रोग सम्बधी क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । चितवनकै स्थायी वासिन्दा हुनुभएका निर्देशक डा. आचार्य १६ वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हाले लगत्तै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले निजि अस्पतलामा आफुले काम नगर्ने घोषणा गर्नभएको छ ।
यसअघि अस्पतालको अनुमतिमा निजिमा काम गरेको भएपनि आफुले अस्पतालको विकासको लागि निजिमा काम गर्न छोडेको बताउनुभयो । अस्पतालका कर्मचारीले आज उहाँलाई स्वागत गरेका थिए । अस्पतालको सेवालाई सुधार गरेर अस्पतालको छवि उचो पार्ने बताउनुभयो । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बढाएर काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अस्पताललाई कसरी अगाढी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल समेत गर्नुभएको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट चितवनमा एकैदिन तीन जनाको मृत्यु
रत्ननगरका मुसहरलाई न्यानो कपडा वितरण